Sina Pabrikan'ny yaourt kely sy mpanamboatra | Hanketo
Ny vokatra yaourt eny an-tsena dia karazana manamafy, karazana fikolokoloana ary karazana tsiro misy voankazo isan-karazany.
Ny fizotry ny famokarana yaourt dia azo fintina ho toy ny akora, preheating, homogenization, sterilization, cool, inoculation, (famenoana: ho an'ny yaourt mihamafy), fanamasinana, fampangatsiahana, (fampifangaroana: ho an'ny yaourt ahetsiketsika), fonosana ary masaka. Ny tsiranoka novaina dia nampiana amin'ny dingana famonoana, ary ny vokatr'izany dia mifandray akaiky amin'ny fifehezana ny fizotrany
Akora ilaina: arakaraka ny taratasy fifandanjana ara-nofo, safidio ny akora ilaina, toy ny ronono, siramamy ary stabilizer. Ny tsiranoka novaina dia azo ampiana misaraka amin'ny fizotran'ny akora, ary azo ampiana aorian'ny fangaro maina amin'ny siligaoma sakafo hafa. Raha heverina fa ny tsiranoka sy ny siligaoma ara-tsakafo dia singa molekiola avo indrindra amin'ny hydrophilicity matanjaka, tsara kokoa ny manafangaro azy ireo amin'ny siramamy vita amin'ny granulated mety ary mamono azy ireo amin'ny ronono mafana (55 ℃ ~ 65 ℃) eo ambanin'ny fanjakana mampihetsi-po haingana hanatsara ny fanaparitahana azy ireo. .
Mikoriana ny fizotran'ny fitaovana yaourt sasany:
Preheating: ny tanjon'ny preheating dia ny fanatsarana ny fahombiazan'ny homogenization amin'ny dingana manaraka, ary ny fisafidianana ny mari-pana mialoha ny hafanana dia tsy tokony ho avo kokoa noho ny maripana gelatinization an'ny starch (mba hisorohana ny firafitry ny sombin-javatra simba amin'ny fizotran'ny homogenisation aorian'ny gelatinization ny starch).
Homogenisation: ny homogenisation dia manondro ny fitsaboana mekanika ny globules tavy ronono, ka globules tavy kely no miparitaka ao anaty ronono. Ao amin'ny dingana homogenization, ny fitaovana dia iharan'ny herin'ny herinaratra, ny fifandonana ary ny rongony. Ny starch starch starch dia misy fanoherana mahery vaika mekanika noho ny fanovana ny cross-linking, izay afaka mitazona ny fahamendrehan'ny firafitra granule, izay mitazona ny viscosity sy ny endrik'ilay yaourt.
Sterilization: ny pasteurisation dia matetika ampiasaina, ary ny fizotran'ny fanamorana ny 95 ℃ sy ny 300 dia raisina amin'ny zavamaniry ronono. Ny tsiranoka novaina dia nitarina tanteraka ary gelatinized tamin'ity dingana ity mba hamorona viscosity.
Ny fampangatsiahana, ny famindrana ary ny fanamasinana: ny starch dia misy karazana molekiola avo, izay mbola mitazona ny fananana sasany amin'ny tsiranoka tany am-boalohany, izany hoe, polisakarida. Eo ambanin'ny sandan'ny pH yaorta, ny starch dia tsy ho simba amin'ny bakteria, noho izany dia afaka mitazona ny fahamarinan-toerana ny rafitra. Rehefa latsaka amin'ny teboka isoelectric ny casein ny sandan'ny pH ny rafitra fermentation dia mihena sy mivaingana ny casein ary mamorona rafitra tambajotran-telo misy ifandraisany amin'ny rano ary lasa curd ny rafitra. Amin'izao fotoana izao, ny starch gelatinized dia afaka mameno ny taolam-paty, mamatotra rano maimaim-poana ary mitazona ny fitoniana ao amin'ny rafitra.
Mangatsiaka, mampihetsi-po ary rehefa avy masaka: ny tanjon'ny fikolokoloana yaourt dia ny fanakanana haingana ny fitomboan'ny zavamiaina bitika sy ny hetsika anzima, indrindra hisorohana ny famokarana asidra be loatra sy ny tsy fahampian-drano mandritra ny fikorontanana. Noho ny loharanom-pahalalana hafa samihafa, ny tsiranoka novaina dia manana mari-pahaizana denaturation samy hafa, ary ny vokatry ny zana-kazo novaina samy hafa ampiasaina amin'ny famokarana yaourt dia tsy mitovy. Noho izany, ny starch novaina dia azo omena arakaraka ny fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny yaorta.
Previous: Ny voankazo sy legioma fanamainana sy famonosana andalana iray manontolo
Manaraka: Nanamboatra labiera vaovao ny tenany